‘बेबि आई लव यू’ को प्रोमोले दर्शक लोभ्याउला ? « Ramailo छ
‘बेबि आई लव यू’ को प्रोमोले दर्शक लोभ्याउला ?
जेठ १८ गते देखि प्रदर्शनमा आउने फिल्म फिल्म ‘बेबि आई लव यू’ को प्रोमो सार्वजनिक गरिएको छ । बिहिबार प्रेसमिट गर्दै यो लभ स्टोरी फिल्मको ट्रेलर लञ्च गरिएको हो । प्रोमोमा नव नायक सन्तोष खड्गी र नायिका पूजा तिवारीबिचको लभ, रोमान्स र र विछोडलाई देखाइएको छ । प्रोमो हेर्नुस् :
प्रेसमिटमा प्रस्तुतकर्ता शिव न्यौपानेले फिल्मले युवा पुस्तालाई आकर्षण गर्ने बताए । यस्तै फिल्ममा संगीत समेत दिएका नायक खड्गीले फिल्ममा सक्दो मिहेनत गरेको बताए । जनक पाण्डे निर्देशित फिल्ममा अभिनेता सरोज खनाल, कलाकार निर्मल शर्माको अभिनय र चर्चित डान्स ग्रुप कार्टुञ्ज क्रुको पनि एउटा डान्स छ ।
कार्टुुञ्ज क्रुको प्रस्तुती रहेको फिल्मको ‘कान्छी मायालु’ बोलको गीत तथा भिडियो हिट भैसकेको छ । फिल्ममा सह निर्माताको रुपमा सृजना परियार र दुर्गा पाण्डे छन् । बिहिबारको प्रेसमिटमा ‘कान्छी मायालु’ गीतमा कभर डान्स र गाउनेलाई पुरस्कृत पनि गरियो ।
बिटुडी डान्स ग्रुप र कभर गाउने प्रितम सेञ्चुरीलाई एक एक लाख बराबरको चेक कार्टुञ्ज क्रु का सरोज अधिकारी, आश्मा विश्वकर्मा तथा समुहले हस्तान्तरण गरे।